-အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်တစ်ရပ် ဖွဲ့စည်း… – PVTV Myanmar
-အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်တစ်ရပ် ဖွဲ့စည်း
-အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်ထဲ စစ်လက်နက်နဲ့ နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ မရောက်ရှိအောင် ဟန့်တားကာကွယ်သွားမယ် G7 နိုင်ငံများ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်
-ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံက အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကို လက်နက်ရောင်းချမှု ပိတ်ပင်မိန့်တစ်ရပ် အမြန်ဆုံး ချမှတ်ရမည်လို့ Amnesty International နှင့် Human Rights Watch အပါအ၀င် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း ၂၀၀ ခန့်က တိုက်တွန်းတောင်းဆို
-မြန်မာနိုင်ငံက အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီတပ်များ၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများ ချက်ချင်းရပ်တန့်ရန် နောဒစ်နိုင်ငံများ ပူးတွဲ ကြေညာ စတဲ့ PVTV ရဲ့ ညနေခင်းသတင်းအစီအစဉ်ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Like – 5.1K Share – 536
2021-05-06 at 9:55 PM
Thanks UN,Save Myanmar Fast💖🤍💙
2021-05-06 at 9:58 PM
AyeAye Kyaw says:
2021-05-06 at 10:38 PM
2021-05-06 at 11:05 PM
NUG က လက်ဝင်လျှိုစရာ မလိုဘူး။ ခေါင်းခံစရာ မလိုဘူး။ ဒီလို လုပ်ခဲ့လို့ ဒေါ်စု ခံခဲ့ရပြီးပြီ။ နှစ်ဘက်စလုံးရဲ့ အပြစ်တင်ခံရတာပဲရှိတယ်။
ရခိုင်နဲ့ ရိုဟင်ဂျာ သူတို့ဟာ အတူတူ ယှဉ်တွဲ နေရမှာ ဖြစ်လို့ သူတို့ချင်း​ ပြေလည်အောင် အရင်ဆုံး ညှိဖို့ ပဲ တိုက်တွန်းသင့်တယ်။
ရိုဟင်ဂျာကို နိုင်ငံသားပေးသင့်မသင့်၊ တိုင်းရင်းသား ပေးသင့်မသင့်က မဆလ ၁၉၈၂ ဥပဒေ၊ မအလ ဥပဒေတွေနဲ့ တိုင်းတာလို့ မရဘူး..
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါ ရခိုင်ပြည်ဟာ သီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ပေါ်လာပြီး ပြည်နယ် ဥပဒေတွေ ပြဒါန်းလိမ့်မယ်
အဲဒီအခါ “ပြည်နယ်သား” ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရအသစ် ပေါ်လာမယ်။ ပြည်နယ် လဝက ဥပဒေအသစ် ပေါ်လာမယ်။
ရိုဟင်ဂျာဟာ “ပြည်နယ်သား” အဖြစ် ရခိုင်လွှတ်တော်က သတ်မှတ်ပေးရင်၊ အလိုလိုပဲ “ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသား ” ဖြစ်ပါ​ပြီ။
အကယ်လို့ ရခိုင်နိုင်ငံတော်အဖြစ် သီးခြားခွဲထွက်ရင် ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စက ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနဲ့ လုံးဝ မသက်ဆိုင်တော့ပါ။ ရိုဟင်ဂျာဟာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ဟုတ်မဟုတ် ရခိုင်နိုင်ငံတော်အစိုးရက ဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ NUG က ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကို ဝင်ရောက် ဆုံးဖြတ်ပေးတာ မလုပ်သင့်ပါ
2021-05-07 at 12:04 AM
Kyaw Zaw Hein says:
2021-05-07 at 12:52 AM
Htet Thinzar Aung says:
2021-05-07 at 1:04 AM
shame on you Public Voice Television
Nyan Htet Aung says:
2021-05-07 at 1:10 AM
နောက်တက်လာမည့်ကောင်ကလည်း racist ဆို အဆင်မပြေဘူးနော်
Myat Thuya Lwin says:
2021-05-07 at 1:16 AM
ဒီကိစ္စ ကို နောက်မှ ရှင်းမယ် ဆိုတာမျိူးထက်
အခုရှူပ်မှ နောင်ရှင်းဆိုတာမျိူးလေး ကြိုးစားပေးကြပါ
ဒေါ်ခင်မမမျိူး တို့ ဦးဝင်းမြတ်အေးတို့ကနေစပြီး အပြုသဘောဆောင်တဲ့ တောင်းပန်မှူမျိူးတွေ လုပ်ပေးစေချင်တယ် နောက်ပြီး ၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေကို ပယ်ဖျက်ပေးတါမျိုး ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့
ကိုယ့် အစိုးရကို အကောင်းဆုံး လူသားလျင်းစာနာမှူရှိတဲ့ racist မဟုတ်တဲ့ အစိုးရမျိူး ဖြစ်ချင်မိတာပါ
2021-05-07 at 1:18 AM
အရင်ဆုံး ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စကိုတောင်းပန်လိုက်ပါလားဗျာ?
2021-05-07 at 1:29 AM
Who controls this Facebook page? NUG?
2021-05-07 at 1:32 AM
A StarFrom Sky says:
ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် သစ္စာရှိတာသက်သက် (ရိုဟင်ဂျာများကို မဆိုလို) ခိုးဝင် မုန်းတီးရေးဝါဒတော့ မထားကြပါနဲ့ လူကြီးမင်းတို့
ရှင်ကြီး ကျားလောက်ဆိုးတော့ မဖြစ်ပါနဲ့ဗျာ
Genocideမှုအပါ စစ်ဂျင်းတွေကို စိတ်လိုလက်ရ စားမိခဲ့ကြောင်းတော့ တောင်းပန်ပါလားဗျာ
2021-05-07 at 2:01 AM
Why you banned her admins? Are you racist? Named public voice television and banned everyone who commented about Rohingya. Fk off admins banned me I don’t fking care racists.
Bhone Myat Min says:
2021-05-07 at 6:22 AM
ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတောင်းပန်ပါ နိုင်ငံကိုဦးဆောင်မယ့်သူတွေက ကိုယ်အမှားကိုယ် လက်မခံနိုင်ကြသေးဘူးလား
2021-05-07 at 7:43 AM
This time better fot NUG to apologies Rohingya and to cancel 82 law
Yel Min Aung says:
2021-05-07 at 8:21 AM
Apologise to Rohingya!
Min Khant Si Thu says:
You banned the comment of “ရိုဟင်ဂျာတွေကို တောင်းပန်သင့်တယ်”. ဒီမိုကရေစီ အစစ်ကိုရချင်ရင် free speech ကနေအရင်စရတယ်။ comment ကအစလိုက် မban ပါနဲ့။ ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ မဖြေရှင်းနိုင်သေးရင် မဖြေရှင်းနိုင်သေးကြောင်း ညှိစရာရှိရင် ညှိစရာရှိကြောင်း ပြောသင့်ပါတယ်။ ခုကျတော့ comment လေးကအစ လိုက်ဘန်းနေတာ ရုပ်ပေါက်လွန်းတယ်
Naing Linn Oo says:
You banned the comment of “ရိုဟင်ဂျာတွေကို တောင်းပန်သင့်တယ်”. ဒီမိုကရေစီ အစစ်ကိုရချင်ရင် free speech ကနေအရင်စရတယ်။ comment ကအစလိုက် မban ပါနဲ့။ ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
အာဏာသာရှိရင် တရားစွဲ၊ထောင်ချမလား မသိဘူး
2021-05-07 at 10:54 AM
ရုံးမတက်နဲ့ ရုန်းထွက် လို့ အော်ခဲ့တဲ့ ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများ၊ အခု ခင်ဗျားတို့အလှည့် ရောက်ပါပြီ။
ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အခြေခံပညာကျောင်းနေကလေးတွေ CDM လုပ်ဖို့ ခင်ဗျားတို့တာဝန်ယူရမယ့်အလှည့်ပါ။
ဝန်ထမ်းတွေဘက်က CDM လုပ်ပြီး သက်သေပြခဲ့ပြီ။ သူတို့ရဲ့ ဘဝနဲ့ရင်းထားတဲ့အလုပ်ကို စွန်လွှတ်ကြပြီ။ လစာမယူဘဲ ရင်ဆိုင်နေကြပြီ။ တရားစွဲခံပြီး အံတုနေကြပြီ။ အခု တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ တက္ကသိုလ်ဆက်မတက်ဘဲ CDM လုပ်နေကြပြီ။ မကြာခင် ခင်ဗျားတို့ မိဘတွေ အလှည့်ပါ။ ကြည့်မယ်။
2021-05-07 at 11:41 AM
“အရင္ဆံုး႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥကိုေတာင္းပန္ပါလားဗ်” အဲ့cmtကိုban လိုက္တာ PVTVအေနနဲ႔ဘာေျပာခ်င္ပါသလဲ?? Free Speech ေလးေတာင္မရွိရင္ေတာ့အဆင္မေျပဘူးေလ
Ye Htet Mg Mg says:
2021-05-07 at 1:42 PM
2021-05-07 at 2:33 PM
ရို အရေး မတောင်းပန်ရင် နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုခံရဖုိ့ လည်းမရှိဘူးရှင့် ban တဲ့ အချိုးက ဘာအချိုးလဲ နင်တို့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို ထောက်ပြနေတာလေ ပြည်သူ့အသံ တယ်လီ‌ ဗေးရှင်း ဆို ပြည်သူတွေတောင်းဆိုနေတာနားထောင်လေ အလကားပျင်းလို့ page ထောင်ထားလား NUG ကုိအစထဲက အားမရတာ ခုလိုလုပ်ရက်က ပိုရုပ်ဆိုးစေပါတယ်
Ye Htet Ko Ko says:
2021-05-07 at 11:05 PM